DIMMLITE lamba miloko mavo | Solar Solve Marine
Fahalalaham-pitenenana ho an'ny sambo Windows
Ny jirom-jiron'ny DIMMLITE® dia manome ny fiainana manokana ho an'ny varavarankely any amin'ny faritra marobe an-dranomasina, anisan'izany ny birao, mpitsangatsangana sy trano fisotroana, trano fisakafoanana, efitrano ary maro hafa.
Izy ireo dia misy amin'ny selam-pandrefesana goavam-be amin'ny alim-bidy, ary ny lamba mangarahara amin'ny lamba mainty.
Ny DIMMLITE® dia misy ihany koa amin'ny loko an-jatony maro mba ahafahana mifangaro tanteraka amin'ny fepetra takiana aminao. Ny haben'ny volon-damba goavana dia manome fihetseham-po mafana sy malalaka ao amin'ny efitranonao.
Tahaka ny vokatra rehetra ao amin'ny ROLASOLV®, ny DIMMLITE® dia natao mba ho mora ny mametraka sy mora ampiasaina.
Ny DIMMLITE® dia mazava ho azy ao amin'ny fikarakarana amin'ny tanana fa ho an'ny hafainganam-pandehanana sy sarotra ihany koa mba hahatongavana any amin'ny faritra dia azo atao ihany koa amin'ny asa elektrika.
Amin'ny alalan'ny vokatra vita avy any an-tsekoly voalohany, ny fandefasana haingam-pandeha, ny fanamafisana ny kalitao, ny tsinjara ho an'ny serivisy, ny fanamafisana ny fanamafisana ny fivarotana ary ny Guarantee 1 taona, dia manontany tena ianao hoe ahoana no fomba nitantanana anao tsy misy DIMMLITE®.
Tsindrio eto raha hijery ny endriky ny seho an-tserasera
Misy karazana fandidiana maro samihafa azo atao. Mba miangavy re mifandraisa amin'ny sampana teknika ho fanampiana na torohevitra.
Double tsiran-tsiran-tsisim-bovoka ambany tsy tapaka Ideal for window windows!
Toerana famolavolan'ny tetezana mihenjana
Rantsana ankavia havia havia na havanana
Tsindrio ny sary etsy ambany mba hijerena ny sarin'ny fiasa tena izy (azafady azafady ny varavarankely iray miseho)
Safidy ny sarimihetsika
Misy karazany ny karazan-damba sy ny loko nofongarin'ny Flame Retardant. Ireto ny manaraka:
Tontolon'ny Blackout - 67% PVC, 25% Fiber Glass, 8% Adhesive amin'ny M1 Fire Classification (France). Mora manadio amin'ny savony sy rano. Misy amin'ny lokon'ny standard 6: Navy Blue, Cream, Ecru, White, Gray sy Black. Loko hafa azo atao amin'ny fangatahana.
LYVERSCREEN® Fabric - Open fiberglass fiberglass with flameproof vinyl coating, very versatile and easily maintained. Ny fiovana eo amin'ny fisokafan'ny rivotra dia ahafahan'ny sehatra samihafa ivelany. Loko menamena 3 anisan'izany ny fasika fotsy, fotsy fotsy ary fotsy. Miaraka amin'ny 50 bebe kokoa amin'ny fangatahana manokana.
100% Polyester Fabric - Misy amin'ny loko tsotra amin'ny 3 tsotra: Denim, Ivory, Caramel. Ny loko hafa dia misy amin'ny fangatahana.
Dimy sy max
Manolotra servisy 24 ora Fast Offpatch isika ho an'ny baiko maika. Ny jiro DIMMLITE® dia omena alamina amin'ny fametrahana fikoratana ho an'ny kofehy tsirairay. Manana tetikady miavaka izy ireo amin'ny fanorenana haingana sy mora amin'ny ekipan'ny sambo.